Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Garoonka caalamiga ee Garaad Wiilwaal oo xariga laga jaray
Garoonka caalamiga ee Garaad Wiilwaal oo xariga laga jaray
Madax heer deegaan ah iyo mid heer Federaal ah ayaa waxey si wadajir ah xariga uga jareen garoonka caalamiga ah ee Garaad Wiilwaal Airport oo muddo dheer lasugayay kaasoo lagu wado inuu deegaanka iyo dalkaba kusoo kordhiyo muunad, magac iyo dhaqaale intaba.
Caasimadda Deegaanka Soomaalida ee Jijiga ayaa waxey yeelatay garoon caalami ah oo lagu wado iney soo fadhiistaan diyaarado caalami ah iyo kuwa waddanka gudihiisa iyadoo lagu wado in dhaqdhaqaaq badan oo ganacsi uukusoo kordhin doono dalka iyo Deegaanka.
Madaxweynaha DDSI Cabdi Maxamuud Cumar iyo wasiirka ganacsiga Ethiopia ayaa si wadajir ah xariga uga jaray garoonka iyadoo maanta waxii ka danbeeya uu garoonku shaqa gali doono.
Waxaa sahlanaan doonta in magaalada Jijiga si toos ah looga dago loogana aado caalamka mustaqbalka dhaw waxeyna noqoneysaa mid in badan la sugayay. Garoonka Garaad Wiilwaal waa guul taariikhi ah oo deegaanka iyo dalka usoo hoyatay waxaana rajeyneynaa in si wanaagsan looga faaiideysto.